Bollywood/ Hollywood – NepalDailyPost
Tag: Bollywood/ Hollywood
बलिउडका सफल चलचित्र अभिनेता गोविन्दाले नेपाली दर्शकबाट आफूले धेरै मायाँ र सम्मान प्राप्त गरेको बताएका छन् । वीरगञ्जमा आयोजना हुन लागेको ‘नेपाल चलचित्र स्वर्णिम महोत्सव’मा सहभागी हुन नेपाल आएका भारतीय अभिनेता गोविन्दाले काठमाडौँमा पत्रकारसँगको कुराकानीका क्रममा भने “मलाई नेपाली दर्शकबाट मायाँ र…
ओम शान्ति ओमबाट बलिउडमा डेब्यु गरेकी चर्चित नायिका हुन् दिपिका पादुकोण । उनि ओम शान्ति ओममा सारुख खान संग अभिनय गदै बलिउडमा डेब्यु गरेकी हुन् । दीपिका पादुकोणले संसारकै सुन्दर महिलाको उपाधी पाउन सफल भएकी छन् ।दुनियाको सुन्दर महिलामा आफ्नो काम र…
एजेन्सी, काठमाडौं। बलिउड अभिनेत्री दिपिका पादुकोण अब अर्को चलचित्रमा अभिनय गर्ने भएकी छिन् । उनले चलचित्र ‘महाभारत’ पछि अर्को नयाँ चलचित्रमा साइन गरिसकेकी छिन् । अब उनले नायिका अनुष्का शेट्टीको तेलुगू भाषामा बनेको फिल्म ‘अरुन्धती’मा काम गर्ने पक्का भएकी छिन् । उनले…
एजेन्सी, काठमाडौं। बलिउडकी चर्चित सुन्दरी नायिका कट्रिनाले भने जस्तो केटा पाए बिहे गर्ने बताउकी छन् । पत्रकारले उनलाई ‘तपाईको समकालीन दीपिका पादुकोण, सोनम कपुर, अनुष्का शर्मा र प्रियंका चोपडाले बिबाह गरिसक्नु भयो, तपाईको पालो आएन र भनी सोधिएको प्रश्नमा आफ्नो जोडी भेटाएका…
एजेन्सी, काठमाडौं। दक्षिण भारतीय सिनेमाकी चर्चित नायिका काजल अग्रवालले विवाह गर्ने भएकी छन् । भारतिय मिडियाका अनुसार उनले बाबु आमाले नै खोजिदिएको केटासँग नै बिहे गर्ने भएकी छन् । सिंघमबाट अजय देवगनसँग बलिउडमा एन्ट्री गर्ने काजल अग्रवालका दक्षिण भारतमा मात्र नभइ बलिउडमा…
दबंगका लागि ३० किलाे ताैल घटाएकी सोनाक्षी
एजेन्सी, काठमाडौं। बलिउड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हाले अपकमिङ फिल्म ‘दबंग–३’ का लागि शरीरको थप तौल घटाएकी छिन् । ‘दबंग ३’का लागि उनले ७ किलो वजन घटाएकी छिन् । सोनाक्षी सिन्हा नायक शत्रुघन शिन्हाकी छोरी हुन् । उनी पहिले निकै माेटी थिइन् । मोटी…
यस फिल्मको सिक्वेलमा फेरि पनि १ साथ देखिदै सलमान र आमिर !
एजेन्सी, काठमाडौं। बलिउड अभिनेता सलमान खान र आमिर खान फेरी पनि एकै सााथ फिल्मको सिक्वेलमा देखिने भएका छन्। फिल्मका राइटर दिलीप शुक्लाले यस कुराको पुष्टि गरेका हुन् । फिल्म अंदाज अपना अपना’ को काहानि पनि दिलीप शुक्लाले नै लेखेका थिए । फिल्म…
अब क्रिकेटर बन्दै शाहिद कपुर !
एजेन्सी, काठमाडौं। पछिल्लो समय बलिउड अभिनेता शाहिद कपुर तेलुगू फिल्म ‘जर्सी’को हिन्दी रिमेकको लागि कडा परिश्रम गरिरहेका छन् । अभिनेता शाहिदले यस रिमेक फिल्मको आफ्नो भूमिकाको न्याय गर्नका लागि क्रिकेट कोचिङ पनि सुरु गरिसकेका छन् । यो फिल्ममा शाहिद एक क्रिकेटरको भूमिकामा…
एजेन्सी, काठमाडौं। एक्शन अभिनेता अक्षय कुमारको मल्टीस्टार फिल्म ‘हाउसफुल–४’को अफिसियल ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । २०१० मा सुरु भएको हाउसफुल फ्रेञ्चाइजीको यो चौथो फिल्म हो । यो फिल्ममा अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बाबी देओल, राणा दग्गुबाती, कृति सेनन, कृति खरबंदा र पूजा…
एजेन्सी, कास्की । मेगा बजेटको चिनियाँ फिल्म नेपालमा छायाङ्कन हुने भएको छ । उक्त फिल्मको छायाङ्कनमा नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० ले समेत सहकार्य गर्ने भएको छ । ‘दवेटु प्योर ल्यान्ड’ नामक फिल्मको छायाङ्कन पोखरा, चितवन, बन्दीपुर र काठमाडौंमा हुने निर्माण युनिटले राजधानीमा…